ပိုက်ဆံပြတ်နေလျှင် ဆန်ေ စ့အနည်း ငယ်ကို ပိုက် ဆံ အ်ိတ်ထဲဆာင်ထားပါ
ပိုက်ဆံပြတ်နေလျှင် ဆန်ေ စ့အနည်း ငယ်ကို ပိုက် ဆံ အ်ိတ်ထဲဆာင်ထားပါ ပိုိက်ဆံပြတ်နေလျှင် ဆန်ေ စ့အနည်း ငယ်ကို ပိုက် ဆံ အ်ိတ်ထဲဆာင်ထားပါ …. ။ ငွေကြေး၊ အလုပ်အ ကိုင် နှင့်ပတ်သက် သော စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေသူများအတွက် ကုစားနိုင် သည့်နည်း ၃မျိုး ရှိသည် … ။ ပိုိက်ဆံပြ တ်နေလျှင် ဆန်စေ့အနည်း ငယ်ကို ပိုက်ဆံအ်ိတ်ထဲဆာင်ထားပါ … ။ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အတွက်ြ ဖစ်စေ၊ ငွေကြေးတိုးပွားစေရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည် …. ။ နည်းများမှာ ၊ဆန်ကိုအ သုံးပြု ခြင်းပါဝင်ပြီး ဆန်သည်ဘဝတွင်ကြုံတွေ့ရသောပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ဆန်ကို မင်္ဂလာရှိသည့် ကိစ္စများတွင်သုံးသည်။ ပြီးပြည့်စုံ သည် …
“ဘိလပ်အပြန်မှာ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်မှာ (၈)နာရီကြာသောင်တင်နေရတဲ့ အောင်ရင်တို့ဇနီးမောင်နှံ”
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်ကြီးဦးအောင်ရင်ကတော့ ဘိလပ်အပြန်မှာ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်မှာ (၈)နာရီကြာသောင်တင်နေရတဲ့အကြောင်းကို “မုန်းပြီဗျာ ရန်ကုန်ပြန်လာတုန်းက Emirates return ticket ဝယ်ထားတာ၊ အခုဘိလပ်အပြန်မှာ Emirates ကမြန်မာပြည် မဆွဲတော့ဘူး ရုံးပါပိတ်သွားပြီ၊Fly Dubai နဲ့ ဒူဘိုင်းကိုတင်ပေးလိုက်တာ Transit လည်းရောက်ရော Connection flight counter ကိုအချိန်မှီရောက်ရဲ့သားနဲ့ ပထမလေယာဉ် delay တယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ကို flight cancelled ဆိုပြီးလုပ်ပလိုက်တယ်၊ ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေဗျာ၊ မုန်းတာ အခု ဒူဘိုင်းလေဆိပ်မှာ (၈) နာရီသောင်တင်တယ်၊ ညောင်းချက် ( 14.01.2020 )” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အောင်ရင်ကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါကတည်းက သီချင်းခွေပေါင်းများစွာသီဆိုခဲ့ကာ …
မပိန်ချင်ပဲ ဗိုက်ခေါက်အဆီပဲ ကျချင်ရင် စမ်းကြည့်ပါ
မပိန်ချင်ပဲ ဗိုက်ခေါက်အဆီပဲ ကျချင်ရင် စမ်းကြည့်ပါ လူပိန်ချင် တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ဗိုက်ခေါက်အဆီ၊ ခါးဆီ၊ ကျောဆီလို အဆီပိုတွေပဲ ကျချင်တယ် ဆိုသူများ အတွက် ဆေးနည်းကောင်းလေးပါ … ။ အချိန်မကုန် လွယ်ကူသက်သာတဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပေမယ့် နည်းလမ်း မှန်မှန်နဲ့တော့ ဇွဲရှိရှိ လုပ်ရ ပါမယ် … ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ——————– (1) သံပုရာသီး တစ်လုံး (2) ဂျင်း လက် တစ်ဆစ်ခန့် နဲ့ပျားရည် ၂ ဇွန်းခန့် – ပထမဆုံး သံပုရာသီး နဲ့ဂျင်းလက် တစ်ဆစ်ကိုအခွံမခွါပဲ ရေစင်စင်ဆေးပါပြီးလျှင် နှစ်မျိုးလုံးကို အကွင်းလိုက်ပါးပါးလေး လှီးပေးပါ ။ …
ပရိသတ်ကြီး ဒီနေ့မှာတော့ အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်ဖက်လောက်အောင် အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ အနုပညာလောကက ကလေးငယ်လေး(၃)ယောက်အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) Isabell (ပုပု) Isabell လေးကတော့ အသက်(၉)နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် အသက်အငယ်ဆုံး ရခိုင်တိုင်းရင်းသူ စူပါမော်ဒယ်မလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ Suzhouမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း (၄၅) နိုင်ငံက ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်း (၁၂၈) ယောက်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ “C Plan Kids Supermodel 2019” ပွဲကြီးမှာ First Runner Up ဆုကြီးကို သိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ဒီဆုကြီးအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ Kid Boy မှ Winnerဆုနဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ Kid girl မှ Second …
အိမ်စောင့်နတ် တကယ် ရှိ၊ မရှိဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေကို ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖြေကြားပုံ
အိမ်စောင့်နတ် တကယ် ရှိ၊ မရှိဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေကို ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖြေကြားပုံ ဒေဝတာနံ ကိုယ်မမြင်ရပေမယ့်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်စောင့်နတ်တို့၊ တောစောင့်နတ်တို့၊ တောင်စောင့်နတ်တို့ ဆိုတာ ရှိတယ်။ စောင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်က Duty ချထားလို့ စောင့်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ကို အမှီပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့နတ်ကို အိမ်စောင့်နတ်လို့ ခေါ်တာနော် … ။ အေး… အိမ်ကိုစောင့်ရမယ်လို့ တာဝန်ပေးထားတာလို့တော့ မအောက်မေ့လေနဲ့။ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သတ္တဝါတစ်မျိုးပဲ။ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ကိုယ့်မှာ အိမ်လေးဆောက်ထားပြီ ဆိုလို့ရှိရင် အိမ်မြှောင်တို့ ပိုးဟပ်တို့ အကောင်ပလောင် တွေဟာ ရောက်လာတာပဲလေ။ အဲဒီလိုပဲ ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ နတ်တွေ ဘာတွေဆိုတာလည်း ကိုယ့်အိမ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး သူတို့ဘုံဗိမ္မာန်တွေ ဖြစ်နေတာ … …
အမြဲ ကျန်းမာနေစေဖို့ မနက်တိုင်း ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက် မနက်ခင်းမှာ ပြုလုပ်နေကျ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကြီးမား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လေ့ကျင့်ခန်း သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေ ကလည်း လုပ်ရတာ လွယ်ကူပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်….. (၁) နားကို နှိပ်နယ်ပေးပါ နားကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းက အိပ်ရေးဝစေ ပါတယ်။ အိပ်ယာ နိုးနိုးချင်း မနက်အစောမှာ နားကိုနှိပ်နယ်ပေးရမှာပါ။ နားရဲ့ အားရုံခံစားနိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းက တစ်နေ့တာလုံးအတွက် စွမ်းအင်ကို ဖြည့်ပေးပြီး လန်းဆန်းစေပါတယ် …။ (၂) သံပရာသီး ရေနွေးစိမ် သောက်ပါ မနက်ခင်းမှာ ကောက်ဖီ သောက်ခြင်းထက် သံပရာသီး …
ရန်ကုန်မှာ ဒီရက်ပိုင်း ကြက်သား လုံးဝ မစားကြပါနဲ့ အထူးသတိထားကြပါ
ရန်ကုန်မှာ ဒီရက်ပိုင်း ကြက်သား လုံးဝ မစားကြပါနဲ့ အထူးသတိထားကြပါ မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းက ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှာ ပြုလုပ်တဲ့ြ့မန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသုတေသန ညီလာခံမှာ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ စာတမ်းတစ်စောင်ကြောင့် ရန်ကုန်နေလူထုအကြား အတော်လေးကို ဂယ့်ရိုက်ခဲ့ပါတယ် …။ လူဦးရေ များပြားမှုကြောင့် စားသောက်ကုန်လိုအပ်ချက်များပြီး အေးခဲစာတွေနဲ့ အသီးအရွက်ရှားပါးတဲ့ ရန်ကုန်နေလူထုအတွက်တော့ အတော်လေးကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် …။ အဲ့တာကတော့ ဈေးကွက်ထဲက ဗမာကြက် ၊ မွေးမြူရေးကြက်တွေကို စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အစာအဆိပ်သင့်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ ဆယ်မိုနဲလားပိုးတွေ တွေ့ရှိရတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် …။ ဒီဆယ်မိုးနဲလားပိုးတွေဟာ ကြက်တွေမှာ ၆၀% ခန့်တွေ့ရပြီးတော့ ဆေးယဉ် ပါးနေတာကိုလည်း အံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် …။ ဒီသုတေသနအတွက် ကြက်ဆိုင် ၂၈ …
This Year : 252677
Total Users : 547810
Total views : 2437197